တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် သေဆုံးသူ (၁၁၇)ဦးထိ မြင့်တက်လာ - Xinhua News Agency
ဂျိုဟန္နက်စဗတ်၊ ဇူလိုင် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း Jacob Zumaကို ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုကြောင့် အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အခင်းဖြစ်ရပ်ကြောင့် သေဆုံးသူ (၁၁၇)ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းနိုင်ငံ သမ္မတရုံး ခေတ္တဝန်ကြီး Khumbudzo Ntshavheniက ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။လက်ရှိအချိန်ထိ ဆူပူဆန္ဒပြမှုအတွင်း သေဆုံးခဲ့သူ KwaZulu-Natalပြည်နယ်တွင် (၉၁)ဦး၊ Gautengပြည်နယ်တွင် (၂၆)ဦးရှိပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူ (၂,၂၀၃)ဦး ရှိကြောင်း Khumbudzo Ntshavheniက ယင်းနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ဂျိုဟန္နက်စဗတ်မြို့တွင် ဆန္ဒပြသူများအား ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို ဇူလိုင် ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Gautengပြည်နယ်၏အခြေအနေမှာ အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်ပြောင်းလဲလာရာ ဈေးဆိုင်လုယက်မှုများ အများအပြားလျော့နည်းလာပြီဖြစ်‌သော်လည်း KwaZulu-Natalပြည်နယ်တွင်မူ မကြာခဏဆိုသလို လုယက်မှုများ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်အာဖရိကအကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းDurban၏ အဓိကလမ်းကြောင်းကို ဆန္ဒပြသူများ ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Khumbudzo Ntshavhenက အောက်ဆီဂျင်၊ ဆေးဝါးစသည့် ပစ္စည်းများ မြို့ကြီးများသို့ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အကာအကွယ်ပေးနေကြောင်း ဆိုသည်။
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ဂျိုဟန္နက်စဗတ်မြို့ အရောင်းဆိုင်တစ်ခုတွင် လုယက်သည်ဟု သံသယရှိသူအား ထိန်းသိမ်းထားသည်ကို ဇူလိုင် ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Jacob Zumaသည် ဇူလိုင် ၇ ရက် ညပိုင်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ တရားရုံးမထီမဲ့မြင်ပြုမှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ရာ ၎င်းအား ထောက်ခံကြသူများက ဇူလိုင် ၉ ရက်မှစ၍ ၎င်း၏ဇာတိဖြစ်သည့် KwaZulu-Natalပြည်နယ်တွင် Jacob Zumaကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒပြမှုအပြီး မီးရှို့ဖျက်ဆီးလုယက်အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သမ္မတ Cyril Ramaphosaက ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့အား အကူအညီပေးရန်နှင့် အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းရန် စစ်တပ်စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#SouthAfrica, #protest, #xinhua, #myanmar, #xinhuamyanmar, #တောင်အာဖရိက, #ဆန္ဒပြ, #အဓိကရုဏ်း, #ဆင်ဟွာ
1. A police officer deals with protesters lootingashop in Johannesburg, South Africa, on July 12, 2021. (Photo by Yeshiel/Xinhua)
2. Policemen detain protesters in Johannesburg, South Africa, on July 11, 2021. (Photo by Yeshiel/Xinhua)
3. A police officer detainsasuspect lootingashop in Johannesburg, South Africa, on July 12, 2021. (Photo by Yeshiel/Xinhua)